Mogadishu Journal » Qorshaha Ay Man United ku dooneyso Inay Isaga Iibiso Alexis Sanchez oo Caqabad Weyn Ay Hortaagan Tahay
Qorshaha Ay Man United ku dooneyso Inay Isaga Iibiso Alexis Sanchez oo Caqabad Weyn Ay Hortaagan Tahay
Xiddiga ku fashilmay Manchester United Alexis Sanchez ayaa waxaa doonaya shan kooxood oo Talyaani ah laakiin mushaharkiisa isbuuclaha ah ee uu ku qaato haatan 505 kun ginni ayaa dib u dhigaya in heshiis uu dhaco.
Waxaa la sheegay in tababaraha Man United Ole Gunnar Solskjaer inuusan dooneynin 30 jirkaan islamarkaana uu ku qasbi doono inuu tababar la qaato kooxda juunyeerka sidii uu Mourinho yeelay Shweinstieger.
Juventus, Napoli, AC Milan, Roma iyo Inter Milan ayaa dhamaantood xiiseynaya saxiixa xiddiga reer Chile Alexis Sanchez sida ay sheegtay wargeyska The Times.
Waxaana Man United ay dooneysaa inay iska dirto Sanchez ka hor inta uusan xirmin suuqa kala iibsiga Yurub 2da bisha September, waxaana ay diyaar u yihiin inay qeyb ka bixiyaan mushaharkiisa iyadoo Roma ay amaah ku dooneyso.
Roma ayaa amaah ku rabto xiddigii hore ee Arsenal laakiin waxa ay diideen inay bixiyaan mushaharkiisa qaaliga ah, iyadoo Daily Mail ay sheegtay in mushaharkiisa uu xitaa gaarayo 560 kun ginni marka lagu daro heshiiskiisa xuquuda muuqaalka ah.
Sanchez ayaa magac ku sameysay kooxda Talyaaniga ee Udinese sideed sannadood ka hor sidaasi darteed inuu Talyaaniga aado kuma noqoneyso wax cusub.
Waxaana kooxaha Talyaaniga ay aaminsan yihiin in shantii sannadood ee uu joogay Udinese inay la micno tahay inuu haatan ku najixi doono horyaalka Talyaaniga.
Guddiga doorashada Jubbaland oo waqti cusub oo is diiwaan gelin u qabtay Musharaxiinta mucaaradka